I-Operation Rikati, usozimali umkhonyovu kwi-Android kunye nendlela yokuyiphepha | Iindaba zeGajethi
I-Operation Rikati, usozimali umkhonyovu kwi-Android kunye nendlela yokuyiphepha
Ngakumbi nangakumbi izixhobo eziphathwayo ezisebenza nge-Android, sele sizibala ngamawaka ezigidi kwaye oku kunomdla kakhulu kubathandi bezinye izinto zabantu. Ngokucacileyo, xa unikwa inani labasebenzisi, kunokwenzeka ukuba inani elilungileyo kwaba aliyi kuthatha manyathelo afanelekileyo. KwiActualidad Gadget siqale isifundo sokuhlalutya nokuzama ukuthintela ezona zinto zichaphazeleka kakhulu, abadala bethu, ekuweleni kobu buqhetseba (LINK).
Ukuqhubeka nomcimbi oza kuxoxwa, kwayeIqela leTyala leTelematika loLondolozo loLuntu langenelela kuthungelwano lweenkampani ezixhumeneyo ezazikhohlisile izigidi zabasebenzisi ngokusetyenziswa kobuqhetseba ikhutshelwe kwizixhobo eziphathwayo ze-Android.
Ukufumana amandla afunekayo, bazifihla phakathi kwezicelo zabo ze-Android (.APK) yemvume yomsebenzisi, eyaziwa njenge iimvume kwi-Android, kwaye oko kwenza ukuba ibhalisele iinkqubo zePrimiyamu zeSMS, eziqale ngokungakhethi ukuthumela uthotho lwemiyalezo enexabiso elibalulekileyo kwaye ebangele ukonakala ngokwenyani kwiibhili zeefowuni eziphathwayo zamawaka abasebenzisi. Iziphumo ziye zajikeleza malunga neerandi ezingama-XNUMX ezigidi kumvuzo wobuqhetseba.
Kulula ukunqanda ezi ntlobo zobuqhetseba ukuba siqwalasele iimvume kunye nokukhuphela usetyenziso kuphela kwiivenkile ezisemthethweni zokusebenza, kule meko Google Play Store. Ukukhuphela usetyenziso ngokuthe ngqo kwi-intanethi kungagcina iisenti ezimbalwa kodwa umonakalo omkhulu kwiakhawunti yethu yebhanki xa olu hlobo lwento lusenzeka. Ingxaki kukuba abasebenzisi abaninzi abayikhathaleli kuphela iimvume abazinika izicelo, kodwa abakwazi ukuqonda ubungozi obubangelwa zezi mvume. Ukukhwabanisa kwe-Android ngePrimiyamu yeSMS kuya kusiba yinto eqhelekileyo kwi-Android, ke kufuneka sithathe amanyathelo okhuseleko asisiseko kwaye sithintele oLuntu ukuba bangangeneleli njengakwi-Operation Rikati.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Operation Rikati, usozimali umkhonyovu kwi-Android kunye nendlela yokuyiphepha
Uhlelo lokusebenza lwe-Facebook ngoku lusivumela ukuba sifumane unxibelelwano simahla kwi-Wi-Fi